Semalt: Ukusetyenziswa kweDatha eLungisiweyo yomgangatho Ukufumana ngakumbi iTrafiki kwiWebhusayithi yakho
Ukhe waya kwigumbi elisasazekileyo ekhangela isokisi? Hayi ukubheja bekungekho lula. Ingcinga efanayo isebenza kwiwebhusayithi.
Ukufumana ulwazi kwi-intanethi kulula kakhulu kwaye kuntsokothile. Ukuba unika iwebhusayithi yakho kwiSemalt, ngokungathandabuzekiyo iya kuphuma eqongeni. Kungenxa yokuba siyayazi indlela yokubeka izinto, isicatshulwa kunye nemifanekiso efanelekileyo. Njengabakhi, sichithe iminyaka sisebenza ngezinto ezidingwa yiwebhusayithi yakho kwaye siye safumanisa ukuba singayisebenzisa njani iwebhusayithi yethu ukuba izise iziphumo ezintle.
Kungenxa yoko le webhsayithi nganye kufuneka ibhalisiwe kunye ne-Semalt kodwa kuba oko akunakwenzeka, sibeka umda kwi-intanethi yethu ekuthembiseni iwebhusayithi efana neyakho. Njengeengcali, sinazo izixhobo kunye neetalente zokuyila iwebhusayithi yakho kakuhle kangangokuba iya kuhlala ibonwa xa amagama akho aphambili ekhangelwa kodwa anele ngaloo nto.
Zithini iinkcukacha zoHlelo oluLungisiweyo?
La ngamalungiselelo omxholo kwiwebhusayithi ngokufanelekileyo. I-Semalt inceda iwebhusayithi yakho ngokubeka izinto ezifanelekileyo kwiindawo ezifanelekileyo. Oku kwenza ukuba iindwendwe zakho kunye nabakhweli beinjini yokukhangela bakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo. Eli nqaku linokuba yinto yokugqibela oyikileyo xa uzama ukufumana iwebhusayithi yakho ibekwe kwinqanaba. Kodwa akukhathaleki ukuba aphakame kangakanani na amagama akho aphambili e-SEO, akuyi kuba lula ukufumana ukuba iwebhusayithi yakho ayakhiwanga ngokuchanekileyo.
Kwiminyaka edlulileyo, uSemalt usebenze kunye nabathengi abaninzi kunye newebhusayithi. Ukutyhubela iminyaka, kuye kwaba yinto eqhelekileyo ukufumana iwebhusayithi eyenza ukusetyenziswa okumangalisayo kwamagama aphambili e-SEO. Kodwa ezi webhusayithi azinakufumana naziphi na izithuthi okanye indlela yokucofa, eba yingxaki enkulu kubaninizo. Xa uthatha imibala yewebhusayithi, isitayile sefonti kunye nemizobo, konke okushiyekileyo sisakhiwo.
Ingqondo yethu yomntu ijonge ngokulinganayo, ipatheni, kunye nolandelelwano lokufunda okanye lokuqonda. Oku kuthetha ukuba sinomdla ngakumbi kulandelelwano lwe-1,2,3,4 xa sifunda amanani ethu ukuba umfanekiso osasazwayo wamanani anje nge-10,000, 100, 3, 6. Iingqondo zethu zikhetha ukufumana izinto apho kulindeleke ukuba yiba.
Abasebenzisi kwi-intanethi bakhetha ukuqala ukufunda inqaku okanye umxholo wakho wewebhu ukusuka kolona lwazi luncinci lusezantsi kuye kwelona lunzima. Ngokubanzi, ukuba uqala ngokusisiseko, abafundi baphulukana nomdla kwaye baye kwiwebhusayithi engcono.
Njengoko uyazi, imigaqo-nkqubo kaGoogle yenzelwe ukuba ilungele abasebenzisi kuqala. Oku kuthetha ukuba iwebhusayithi yakho iyabukeka ngakumbi kumfundi, kokukhona inomdla ngakumbi kwi-injini yokukhangela kaGoogle. I-algorithm kaGoogle iqokelela ulwazi kuphendlo kwaye isebenzise le datha ukubeka indawo yakho. Isebenza njani ukuba umsebenzisi ufumana indawo yakho, i-SERP okanye iinjinjini zakho zokukhangela zibeke iliso ixesha elingakanani aba basebenzisi bahlala kwisayithi. Iwebhusayithi eyakhiwe ngokufanelekileyo yenza ukuba undwendwe luhlale ixesha elide kwindawo apho indawo engakhiwanga kakuhle yenza ukuba umfundi ahambe.
Ezinye izinto, njengezinga lokugoba, nazo zibalulekile xa ujonga isakhiwo sendawo. Isakhiwo esihle sesiza sinokunciphisa umda, kunye nexesha lokuhlala lomfundi wakho. Xa udibanisa ezi zinto zimbini, iwebhusayithi yakho ngokuzenzekelayo ibekwa kwinqanaba.
Isakhiwo esihle sendawo inikezela indawo yakho ngezixhumanisi ezingcono zesiza.
Amakhonkco esiza yoluhlu lwefomathi kwi-SERP ebonisa iphepha lakho eliphambili kunye nezixhumanisi ezininzi zangaphakathi. Olu nxibelelaniso lwendawo luyigolide xa kuziwa kwintsebenzo ye-SEO. Benza iwebhusayithi yakho lula ukuba ifundwe ngumsebenzisi. Ikhomba umfundi ulwazi oluchanekileyo kwiwebhusayithi yakho, eyonyusa igama le-brand yakho, kwaye abasebenzisi bayathemba umxholo owunikayo. Zonke ezi zinto zinceda iwebhusayithi yakho ibe nesikhundla esingcono kwi-SERP.
Uzifumana njani ezi ndawo zonxibelelwano?
Awunakuya kukhangelo lweGoogle yokukhangela kwaye ugcwalise iphetshana lokufumana amakhonkco esiza. Ukubeka nje, awukwazi ukucela indawo yokuxhumanisa. La makhonkco anikezelwa ngokuzenzekelayo yi-algorithm kaGoogle xa isakhiwo sakho sendawo sihle ngokwaneleyo ukuba ufaneleke. Kwaye ngaphandle kolu nxibelelaniso lwendawo, iwebhusayithi yakho inokufumana ubunzima ukunciphisa isithuthi sakho ekujolise kuyo, i-CTR ephezulu, kunye nokunyusa ukuguqulwa.
Iinjini zokukhangela zifuna izakhiwo ezingcono zeziza zokukhasa ngcono.
Abakhweli bewebhu abanjengeGooglebot bakhwela kwiiwebhusayithi ngokuya ngesakhiwo sabo. Iwebhusayithi eyakhiwe ngokufanelekileyo yenza ukuba kube lula kwaye kukhawuleze ukuhamba kwaye ufumanise amagama aphambili owabekayo. Injongo yale WebCrawler kukunkomba iziqulatho ukubuyisa uhlalutyo njengeziphumo zophando.
Kuya kufuneka wazi ukuba iziqulatho kwiwebhusayithi yakho azaziwa ngokuzenzekelayo kuGoogle. Aba bakhwetha abafumani nje ziphumo bazikhethileyo ukubonisa ukuba igama eliphambili likhangelwe. UGoogle uqobo uphume esithi abanakufumana amanye amaphepha okanye ii-URL namhlanje. Kungenxa yokuba azange zifunyanwe iWebCrawler kaGoogle. Ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho kunye namaphepha ewebhu awabinayo le ntlekele, kuya kufuneka ukuba iwebhusayithi yakho ibe lula ukufikelela kuyo, kukhasa, kunye nesalathiso kwiWebCrawler's.
Isakhiwo esihle sendawo sisiseko sokwandisa i-SEO
Ekugqibeleni, ilungile kangakanani i-SEO yakho kwaye ngokuyintloko zichazwe ngokupheleleyo ngokwakhiwa kwesiza sakho. Uninzi lweengcali ziya kuphikisana ukuba ngaphandle kwesakhiwo esihle sendawo, i-SEO yakho ayinakuze iphumelele. Ubume besiza sisiseko se-SEO yakho, kwaye njengaso nasiphi na isakhiwo, isiseko kufuneka somelele. Isiseko esibuthathaka okanye esingakhiwanga kakuhle sithetha ukuba isakhiwo sakho siya kudilika. Ekugqibeleni, yinto yemihla ngemihla kuphela. Ngokufanayo, iwebhusayithi yakho ekugqibeleni iya kusilela ngaphandle kwesakhiwo esifanelekileyo.
Nanga amanyathelo okudala ukwakhiwa kwesiza esifanelekileyo
Phuhlisa isikhundla sokusebenza ngaphambi kokuphuhlisa iwebhusayithi yakho
Ukuba uqala iwebhusayithi entsha, unokucwangcisa ukuba yeyiphi na indawo eza kuqala kuyo. Kwanangaphambi kokuba uhambele phambili ukwenza amaphepha kwi-CMS, kuya kufuneka ucwangcise ukuba yeyiphi indawo onqwenela ukuba iwebhusayithi ithathe. Unokwenza ucwangciso kwi-spreadsheet, ibhodi emhlophe, okanye kwiprosesa yegama.
Ulwazi lwakho kufuneka lube ne-hierarchy. Ulwazi olubonisiweyo kufuneka luhambe ngendlela evakalayo. Nje ukuba ugqibile, oku kulawula isikhundla kuya kuba ngumgaqo wokuhamba nokuhamba kwe-URL, ngoko ke onke amanyathelo abalulekileyo okanye abalulekileyo owathatha kuwo ayachaphazeleka kwinto oyenzayo apha.
Kukho izinto ezimbalwa zokubonisa ubunkokeli ekufuneka uzigcine engqondweni.
Yenza iinjongo zakho zobunkokeli zibe sengqiqweni. Sukuzama ukwenza inkqubela phambili enkulu okanye ukwenza izinto zibe nzima.
Gcina inaniodidi oluphambili phakathi kwesibini nesixhenxe. Ngaphandle kokuba uyindawo yokuthenga ye-eCommerce, awufuni ukuba nezigaba ezininzi kakhulu. Yenza iwebhusayithi yakho nayo, "ixakeke."
Zama ukulinganisela inani lamacandelwana akwicandelo ngalinye. Nangona oku kunganyanzelekanga, yinto abaqulunqi bewebhu ekufuneka bezame kwaye bayiphumeze. Udidi oluphambili akufuneki ukuba lube namacandelwana alishumi, ngelixa elinye linesihlanu kuphela. Yenza ukuba iwebhusayithi ibonakale ingenanzuzo.
Uyilo lwe-URL yakho kufuneka lulandele isikhundla sakho sokuhamba.
Enye into ebalulekileyo sisakhiwo se-URL. Ukuba wenze inyathelo lokuqala ngokufanelekileyo, oku akufanele kube yingxaki. I-URL yakho iya kuthwala iwebhusayithi eyintloko, udidi oluphambili, ngaphambi kwecandelwana. Ifanele ijongeke njenge-SSaltalt.net/SEO/UsingQualityStructureDataToGetMoreClicks. Olu nxibelelaniso lucwangcisa ulwazi oluboniswe ngokwesikhundla sayo.
Ukuhamba kwesiza sakho kufuneka kube kwifomathi ye-CSS okanye ye-HTML.
Xa usenza iwebhusayithi, gcina iikhowudi zilula. Ukusebenzisa ulwimi lokunyanzela iikhowudi kwenza kube nzima kwiWebCrawler's ukukhusela indawo yakho.
Sebenzisa ubume bokuhamba obunzulu, obunzulu.
Xa usenza isigqibo sokuba yintoni apho ihamba khona, lumka ungazingcwabeli ezona ndawo zibalulekileyo zewebhusayithi yakho zinzulu kakhulu kwindawo yakho yezikhundla, indawo ezinamanzi zisebenza bhetele kakhulu kubo bobabini abakhweli bewebhu kunye nabafundi bakho.
Phuhlisa isakhiwo sokudibanisa esingaphakathi esibanzi
Sichonge izizathu ezintathu zokuba kutheni le ndlela kubalulekile ukuyilwa kwewebhusayithi yakho. Nalu uluhlu lokuba kutheni unxibelelwano lwangaphakathi lubalulekile:
Bayabavumela abasebenzisi ukuba baye kwiwebhusayithi
Bayanceda ukuseka isikhundla solwazi kwiwebhusayithi.
Bayanceda ekusasazeni amandla okusebenza kwiwebhusayithi iphela, ekunikeni isikhundla esingcono.
Nganye kwezi inegalelo ekwenzeni iwebhusayithi ebekwe ngendlela efanelekileyo.
Amakhonkco angaphakathi awangathi yinzululwazi ye-rocket. Kuthetha ukuba udibanisa umxholo okanye iphepha kwiwebhusayithi yakho nakwelilandelayo. Olu nxibelelaniso lwangaphakathi kufuneka lwalathise umfundi wakho kumaphepha alandelayo ahambelana nephepha lodidi oluphambili.
Amakhonkco angaphakathi axelela iinjini zokukhangela ukuba zeziphi iwebhusayithi ezibalulekileyo kunye nendlela yokufika apho.